Tag: modely mailaka | Martech Zone
Tag: modely mailaka
Alarobia, Aprily 20, 2016 Alatsinainy Martsa 8, 2021 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay izao izay tsy mandray tsara ny mailaka e-varotra misy azy ireo. Tsy isalasalana fa very ny tsindry sy ny fiovam-po izy ireo noho ny fiovan'ny fihetsiky ny mpanjifa mifindra amin'ny finday. 60 %% amin'ny mailaka rehetra nalefa no nosokafana tamin'ny finday. Fifandraisana tsy tapaka Mety efa fantatrao angamba ny famolavolana mamaly - amin'ny ankapobeny ny kaody tranokala izay mampifanaraka ny firafitry ny tranokalanao mba hahazoana antoka fa voatsara ho an'ny efijery sy ny famahana izany.
Zoma, Jolay 10, 2015 Douglas Karr
Raha mitady fitaomam-panahy ho an'ny modely mailakao manaraka ianao, mitady hividy modely mailaka azonao ovaina, na koa mitady hanangana modely mailaka mamaly avy hatrany am-boalohany - aza mitady lavitra intsony noho i Stamplia. Manolotra karazan-dahatsoratra tsy lafo nefa mahafinaritra, mailaka mifanakalo, ary modely vonona handeha ho an'ny Magento, ecommerce Prestashop, Campaign Monitor na Mailchimp ihany koa. Ny maodelin'ny mailaka tsirairay dia manana pejy famaritana, endrika ary
Alatsinainy Martsa 16, 2015 Alahady, Martsa 15, 2015 Douglas Karr
Mpamatsy tolotra mailaka iray izay tsy nozarainay betsaka momba izany dia ny Campaign Monitor. Nohajaina hatrany izy ireo teo amin'ny sehatry ny indostria noho ny tatitra tsara nataony, saingy niova ho mpanome tolotra mailaka mailaka ho an'ny orinasa na sampan-draharaha. Ny sasany amin'ireo fiasa tsy manam-paharoa amin'ny Fampirantiana Monitor Branding - Ny fampielezan-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra dia tsy ampidirina amin'ny alàlan'ny logo amin'ny alàlan'ny mailaka alohany ary ny interface interface dia azo adika fotsy amin'ny maso ivoho na orinasa misy anao. iPhone Reporting - Fanaraha-maso ny fanentanana